Oke ohia: njirimara, ebe obibi, ihu igwe, ahịhịa na osisi | Network Meteorology
E nwere ụdị okike dị iche iche dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Taa, anyị ga-ekwu maka Oke ohia. O kwekọrọ na mpaghara oke ọhịa Amazon nke dị na ọwụwa anyanwụ nke ugwu ugwu Andean. Ọ bụ ụdị oke mmiri ozuzo dị mma nke nwere ebe dị elu site na 80 ruo 400 mita karịa ọkwa mmiri. A na-achọta otu efere nke osimiri Amazon.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, ebe obibi, ahịhịa na ahịhịa nke oke ọhịa.
2 Ebe obibi na ebe oke ọhịa dị
3 Ala na ihu igwe nke oke ohia
Ọ bụ ụdị ọhịa a makwaara dị ka mpaghara Omagua. Ihe mejuputara ya bu ihe omumu nke nwere ihe di mgbagwoju anya nke di n’agbata uzo 3 na 4 ma obu akwukwo ahihia nke etinyere na ihe. Ala ahịhịa ndị a bụ n'ihi ụdị na ịdị elu dị iche iche a kpụrụ dị ka uto na mmepe ha. Ihe dị n'okpuru bụ akụkụ dị ala nke dị n'okpuru treetops. Bụ ebe na umu anumanu di iche iche juputara epiphytic na osisi ịrị. Niile atụmatụ ndị a bụ akụkụ nke mmiri ozuzo biome.
Mpaghara oke ohia nwere ala akọrọ na ala, n’agbanyeghi na oke mmiri juputara na ya, apiti mmiri na ahihia nwere ahihia. Njirimara nke oke ohia di ala guzoputara inwe ihu igwe nke okpomoku di ihe di ka ogo 26 na nkezi na nwere oke ugwu nke gafere 3.000 mm.
Oké ọhịa dị na mbara ala na-adịghị edozi edozi nke ala kachasị elu nwere ájá ájá na ọtụtụ mmiri na iyi. Anụmanụ ahụ dị oke ma ụmụ ahụhụ na arachnids kachasị. Ihe mbu a bu ihe di iche-iche di iche-iche na onu ogugu ndi mmadu. Ozo ihe nlebara anya bu otutu azu ndi ozo, nnunu, na anuputa aru na anuputa anumanu ndị anyị na-ahụ dị iche iche, ọtụtụ ụdị enwe na jaguar.
Banyere flora, e nwere nnukwu ihe dị iche iche nke osisi vaskụla. Anyị na-ahụkwa ọtụtụ ụdị fern, moss, na lichen. Enwere ike ịsị na naanị otu hectare nke ọhịa dị larịị, a chọpụtara ihe karịrị ụdị osisi 300 nwere ọtụtụ orchid na bromeliads.
Ebe obibi na ebe oke ọhịa dị
Mpaghara a dum na-ezo aka na mpaghara okike nke Peru ma na-etolite na ndagwurugwu nke gbatịrị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ. Mpaghara a bụ nke kachasị ukwuu ebe ọ bụ mpaghara gburugburu hectare 65 nde. Oke oke ohia di ala gere oke ohia na ugwu ugwu Andean. Enwere ike ịchọta ya n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ma ọ bụrụ na anyị gafere n'oké ọhịa Amazon nke Brazil, na ndịda ọwụwa anyanwụ ya na Bolivia na n'akụkụ ugwu ya na Colombia na Ecuador.
A na-ahụta oke ọhịa a dị larịị dị ka biome. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị usoro obibi dị mfe, kama ọ bụ biome nke gụnyere mosaic nke usoro okike n'ime. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ usoro nke usoro okike na otu ókèala. Anyị na-achọta oke ohia nke mmiri na-enweghi mmiri, oke mmiri mmiri, apịtị, ala mmiri, oke ohia ocha, wdg. Nke ọ bụla n’ime ihe ndị a e kere eke nwere ihe ndị pụrụ iche na ihe dị iche iche dị ndụ dị iche iche na-amalite dị ka njirimara gburugburu ebe ndị a.
Ugbo ahihia nke oke ohia di iche. N'ihi ụdị dị iche iche dị iche iche na ntinye na ihe onye ọ bụla n'ime ha chọrọ, enwere nnukwu mgbanwe na nhazi ahụ. N'otu aka, na mpaghara mmiri na-enweghị mmiri, anyị na-ahụ ala nwere usoro dị mma na ọmụmụ ka ukwuu. Ebe ndị a nwere ala 3 ma ọ bụ 4 nke ahịhịa arboreal na osisi nwere osisi na ahịhịa. N'ihi ọmụmụ nke ala na njupụta nke osisi, a na-echekwa ọkwa iru mmiri dị elu n'afọ niile.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere elu ụlọ nke ọhịa nke ruru mita iri anọ n'ịdị elu ma nwee osisi ndị na-eto eto nwere ogo 40 mita. Gburugburu osisi na mpaghara ala anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị osisi na-arị ugwu dị iche iche yana epiphytic osisi.
Ala na ihu igwe nke oke ohia
Ihe kachasị dị mma bụ na ala ndị na-ebukarị oke ọhịa nwere ihe mejupụtara ájá, ọ bụ ezie na ọ kachasị agbanwe agbanwe. Anyị na-ahụkwa ala ájá ájá nke na-aghọ ala mmiri ụrọ n'akụkụ ebe iru mmiri dị elu. Ha bụ ala na-adịghị edozi ahụ na-ahụkarị na ahịhịa ahịhịa. Enwere otutu ero na ndi otu di iche iche nke na enyere aka na imeghari na ojiji nke nri site na ndu ndi nwuru anwu. Dika anyi mara, enwere mmekorita di iche n’etiti ndi mmadu a na-akpo ihe oriri. Njikọ ikpeazụ n'ime agbụ a bụ decomposers. Isi ọrụ ya bụ iwepụta ihe ndị dị n’ime ahịhịa dị ndụ. N'ihi nke a, ọ ga-ekwe omume ịlaghachi na steeti mbụ wee nwetaghachi ike niile nke netwọk ahụ.
Banyere ihu igwe, n’oké ọhịa nke ebe okpomọkụ na-ezo na ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu mana ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-eme ka ugwu ahụ baa ụba. Igwe mmiri ya dị elu sitere na igwe ojii nke a na-adọkpụ site na mkpọda Atlantic na ntụziaka site n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ. Igwe ojii niile na-ebili na ihu ọwụwa anyanwụ nke Andes na mgbe ha jụrụ oyi, ha na-agbakọta iji kpughee oké ifufe na oke mmiri ozuzo.
Ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị na oke ọhịa dị gburugburu ogo 37 n'oge ọnwa Ọktọba. A na-ewepụta opekempe na ọnwa nke ọnwa Julaị ma gbaa gburugburu ogo 17. N'ihi ya, ihe ọ pụtara bụkarị 26 degrees. Site na inwe oke mmiri ozuzo, nke ruru ihe ruru 3.000 millimeters, ọbụna karịa ụfọdụ mpaghara na 5.000 mm na-eme ka ọkwa nke iru mmiri dị oke elu. Anyị na-ahụ ebe nwere ogo iru mmiri dị ala nke 88%.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ọhịa dị larịị na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke ohia